Ama-36 amaNqaku oSuku lweValentine eNtsha- iiQhina zoLuntu ngothando - Usuku Lwezithandani
Ama-36 amaNqaku oSuku lweValentine eNtsha- iiQhina zoLuntu ngothando
Nje ukuba ubethelele ngokugqibeleleyo Usuku lukaValentine , lixesha lokuba ugcwalise ikhadi! Bamba nje omnye: Ukubonisa uthando lwakho kunye neemvakalelo emagama yinto ekhohlisayo kakhulu. Ukungakhathazeki, saqesha izinto ezithandwa nguWilliam Shakespeare, uJohn Lennon, iihuku zentsimbi, kwaye, ewe, uMichael Scott, ukukunceda unxibelelane. Kulo nyaka, thumela eyakho valentine Olunye lolu catshulwa lweengoma oluza ngqo entliziyweni (ukuba ulubhala ngokwakho, ngekhe bazi ukuba uyifumene phi!).
Jonga igalari 36Iifoto U-Alice Morgan weNdlu entle 1Ngama-36UMiranda ngoJulayi
'Xa ubona ubuhle bomthi, uyakuyazi ukuba yintoni uthando.'
U-Alice Morgan weNdlu entle MbiniNgama-36UMichael Scott, 'IOfisi'
'Ndingathanda ukoyikwa okanye ukuthandwa? Um, kulula. Zombini. Ndifuna woyike indlela ondithanda ngayo. '
U-Alice Morgan weNdlu entle 3Ngama-36UCarmen maria machado
'Uthando alunakuphumelela okanye lulahleke; ubudlelwane abunayo inkqubo yokufumana amanqaku. Singamaqabane, sibhangqiwe ngokuchasene nehlabathi. Asinakuphumelela ukuba siyaphikisana. '
Getty / UDiana Fujii 4Ngama-36UEmily Brontë
'Nokuba yeyiphi na imiphefumlo yethu eyakhe, eyakhe neyam iyafana.'
U-Alice Morgan weNdlu entle 5Ngama-36amagwegwe intsimbi
'Uthando luyisenzo, ungalokothi uzive nje.'
Getty / UDiana Fujii 6Ngama-36UJohn Lennon
'Xa sithandana, sivulela bonke ubomi ekufuneka bunikezele.'
Indlu yokulungisa indlu yepawpaw ephezulu
U-Alice Morgan weNdlu entle 7Ngama-36UDanez Smith
Ekupheleni kwehlabathi, makube kuwe, mhlaba wam.
Getty / UDiana Fujii 8Ngama-36UNicholas Spark
Uthando lufana nomoya. Awunakuyibona kodwa uyayiva. '
U-Alice Morgan weNdlu entle 9Ngama-36UDwight Schrute, 'IOfisi'
'Usuku lwam olugqibeleleyo lweValentine? Ndisekhaya, iiselfowuni ezintathu eziphambi kwam, ndibeka iminxeba kubantu abafuna ukuthenga enye yokubekisa kwindawo yokutyela engama-50 endiyenzileyo kwiinyanga ezi-6 ezidlulileyo.
UAlice Morgan 10Ngama-36UAristotle
'Uthando lwenziwa ngumphefumlo omnye ohlala kwimizimba emibini.'
Getty / UDiana Fujii Shumi elinanyeNgama-36UDiana, iNkosazana yaseWales
'Ukuba ufumana umntu omthandayo ebomini bakho, ke jinga kolo thando.'
Getty / UDiana Fujii 12Ngama-36Reese Witherspoon
Uhlala uzuza ngokunika uthando.
izityalo zeendawo ezinomthunzi
Getty / UDiana Fujii 13Ngama-36USam Worthington
'Ndinosuku lukaValentine yonke imihla kuba umfazi wam sisipho esigqibeleleyo.'
UAlice Morgan 14Ngama-36UMaya Angelou
Uthando aluqondi zithintelo. Itsiba imiqobo, itsiba iingcingo, ingena kwiindonga ukuze ifike kwindawo yayo egcwele ithemba.
Getty / UDiana Fujii Shumi elinantlanuNgama-36URupert Brooke
'Ukuncamisa kuyayenza iphinde ibe ntsha intliziyo yakho.'
Getty / UDiana Fujii 16Ngama-36INkosi Byron
'Akukho thando lufana nolo lwentliziyo.'
Getty / UDiana Fujii 17Ngama-36UMarceline Desbordes-Valmore
'Ngaba asifani nemiqulu emibini yencwadi enye?'
Getty / UDiana Fujii 18Ngama-36Mahatma Gandhi
'Apho kukho uthando, kukho ubomi.'
UAlice Morgan 19Ngama-36UZelda Fitzgerald
'Akukho mntu wakha walinganisa, nditsho neembongi, ukuba ingabamba kangakanani intliziyo.'
Getty / UDiana Fujii Amashumi amabiniNgama-36UAnn Landers
'Uthando buhlobo obuvutha umlilo.'
I-chelsea yeentyatyambo zibonisa u-2019
Getty / UDiana Fujii amashumi amabini ananyeNgama-36UBlaise Pascal
'Intliziyo inezizathu zayo ezingasaziyo isizathu.'
Getty / UDiana Fujii 22Ngama-36UThomas Merton
'Asizifumani injongo yobomi sisodwa-siyifumana komnye umntu.'
UAlice Morgan 2. 3Ngama-36UJane Austen
'Akukho luncedo lulingana nokuthantamisa kwentliziyo.'
Getty / UDiana Fujii 24Ngama-36UStephanie Perkins
'Kubabini bethu, ikhaya asiyondawo. Ngumntu kwaye ekugqibeleni sigodukile. '
UCharlie brown umbulelo kumabonwakude
Getty / UDiana Fujii 25Ngama-36UWilliam Shakespeare
Uthando lwam lunzulu. Okukhona ndikunika okuninzi, kokukhona ndinako, kuba zombini ezi zinto azinasiphelo.
Getty / UDiana Fujii 26Ngama-36Namhlanje uPicoult
'Awumthandi umntu kuba egqibelele. Uyakuthanda nangona bengekho. '
UAlice Morgan 27Ngama-36E. E. Cummings
'Ulilanga lam, inyanga yam, nazo zonke iinkwenkwezi zam.'
Getty / UDiana Fujii 28Ngama-36UJohn Updike
'Siphila kakhulu xa sithandana.'
Getty / UDiana Fujii 29Ngama-36UAlfred Tennyson
'Ukuba bendinayo intyatyambo ngalo lonke ixesha ndicinga ngawe ... ndingahamba ngegadi yam ngonaphakade.'
Getty / UDiana Fujii 30Ngama-36UDavid Viscott
'Ukuthanda nokuthandwa kukuziva ilanga kumacala omabini.'
Okulandelayo21 Ukuhombisa kukaSuku lweValentine yoSuku Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsiUCaroline Picard Umhleli wezeMpilo UCaroline nguMhleli wezeMpilo kuGoodHousekeeping.com egubungela isondlo, impilo, impilo kunye nezinye iindaba zokuphila.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io
imibono yokupeyinta kwigumbi lokutyela
isihlangu sekhabhathi sekhabethe
iphi ifoto yasekhaya